प्रशिक्षकलाई चकित पार्ने प्रदर्शन ! - Khelpati
प्रशिक्षकलाई चकित पार्ने प्रदर्शन !
आइतवार, बैशाख १२, २०७८ जितु साउँद
काठमाडौं । त्रिकोणात्मक टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय सिरिजमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको प्रदर्शन निकै उच्च रह्यो ।
सिरिजमा नेपाली टोलीको प्रदर्शन उच्च रहनेमा कसैले पनि आँकलन गरेका थिएनन् । प्रशिक्षक, खेलाडी र समर्थकले कसैले पनि नेपालको यस प्रदर्शनका लागि आँकलन गरेका थिएनन् ।
तर, नेपालको प्रदर्शन देखेर मुख्य प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नै चकित बनेका छन् । सिरिजको फाइनल खेलपछि प्रशिक्षक वाटमोरले आफ्ना खेलाडीको प्रदर्शन देखेर चकित भएको बताएका थिए ।
टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा नेपालले अहिलेसम्म नगरेको प्रदर्शन गरेपछि प्रशिक्षक वाटमोर चकित हुनु स्वभाविक पनि हो ।
बलिङमा अब्बल देखिने नेपाल पहिलो पटक ब्याटिङमा पनि अब्बल देखिएको थियो । कमजोर राष्ट्रसँग विशाल स्कोर बनाउने नेपालले एसोसियट राष्ट्रमा उत्कृष्ट मध्येको एक राष्ट्र नदेरल्यान्ड्सविरुद्ध पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्यो ।
टियू मैदानमा सम्पन्न सिरिज भरीका पाँच खेल खेल्दा पाँचवटै खेलमा नेपालको ब्याटिङ अहिलेसमकै उत्कृष्ट अब्बल सावित भयो । सय देखि १ सय ५० रन बनाउँन धर्मराउने नेपाली ब्याटिङले यस सिरिजमा भने ठुलो लक्ष्य समेत सहजै पूरा गर्यो ।
सिरिजका सुरुवाती दुई खेलमा सामन्य लक्ष्य पाएको नेपालको ओपनिङ जोडीले उत्कृष्ट साझेदारी गरेपछि ९ विकेटले विजयी भएको नेपालले त्यसपछिका खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गर्यो ।
सिरिजको तेस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपालले २ सय ६ रन जोडेको थियो । त्यतिबेलासम्म टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको यो सर्वाधिक दोस्रो उच्च स्कोर थियो । यस खेलमा नेपाल नेदरल्यान्ड्सँग ३ विकेटले पराजित भएपनि नेपालले दोस्रो पटक टी-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा दुई सयको आँकडा पूरा गरेको थियो ।
चौथो खेलमा पुनः पहिले ब्याटिङ थालेको नेपालले मलेसियाविरुद्ध २ सय १७ रन जोड्यो । नेपालले तेस्रो पटक टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा दुई सय रनको आँकडा पार गर्यो । लगातार नेपाली टोलीले दुई सय रनको आँकडा पुरा गरेपछि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि नेपाली टोलीको ब्याटिङमा सुधार आएको बताएका थिए । उनले ओपनिङ जोडी चल्नु र युवा खेलाडीको आत्मविश्वासले विशाल स्कोरमा सहज भएको बताएका थिए ।
सिरिजको फाइनल खेलमा नेपालले नेरदल्यान्ड्सलाई आफ्नो टी–ट्वान्टी क्रिकेट इतिहाँसकै उच्च स्कोरको लक्ष्य सुम्प्यो । नेपालले नेरदल्यान्ड्सलाई २ सय ३८ रनको कीर्तिमानी लक्ष्य सुम्पेको थियो । सोही फाइनलमा खेलमा नेपालले नेरदल्यान्ड्सलाई १ सय ४२ रनको अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी फराकिलो हार चखायो । नेपाली खेलाडीको लगातारको उच्च प्रदर्शन देखेर प्रशिक्षक वाटमोरले युवा खेलाडीको प्रदर्शन देखेर चकित भएको बताएका थिए ।
‘युवा खेलाडी सहित सबै खेलाडीले एकदम राम्रो खेले । युवा खेलाडीलाई जुन विश्वास गरेको थिए, त्यो उनीहरुले पनि आफुलाई प्रमाणित गरेका छन्,’ प्रशिक्षक वाटमोरले भने, ‘अब उनीहरू ठूलो खेलको लागि पनि तयार छन् ।’
सिरिजले दिएको ओपनिङ जोडी -
नेरदल्यान्ड्सविरुद्धको पहिलो खेला नेपालका ओपनरद्धय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले ओपनिङ जोडीको रुपमा टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरे । डेब्युसँगै दुबैले उत्कृष्ट सुरुवात मात्र गरेनन् । फ्लप नेपाली ओपनिङमा जम्न सक्ने संकेत समेत दिए । पहिलो खेलमा १ सय १६ रनको उत्कृष्ट साझेदारी गर्दै दुईले आफूहरु नेपाली टोलीको ओपनिङ जोडीको रुपमा लामो समयसम टिक्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।
हुन त अहिले नै यो जोडी प्रति यतिधेरै महत्वाकांक्षा लिन हतारो हुन सक्छ । तर, यी दुईको यस सिरिजमा देखाएको साझदारीले केही हदसम्म भने नेपाललाई सुहाउने ओपनिङ जोडीको रुपमा आफुलाई उभ्याएका छन् ।
तर, कुशल र आसिफले अझै आफुलाई प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । उनीहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्न अझै धेरै यस्ता प्रतियोगितामा आफ्नो यहि उत्कृष्ट प्रदर्शन दोहोर्राउनु पर्नेछ ।
यसअघि नेपालको अपनिङ जोडी नचल्दा नेपालले खासै स्कोर जोड्न सकेको थिएन् । २०७४ मा भएको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग (डब्लुसिएल) च्याम्पियनसिपमा नेपालले ओपनिङ जोडी नचल्दा ११ औं पटक परिवर्तन गरेको थियो । नेपालले हार बेहोर्नुको एउटै कारण नै ओपनिङ देखिनै ब्याट्सम्यान नचल्नु हो ।
डब्लुसिएलमा नेपालले ओपनिङ जोडीको रुपमा ज्ञानेन्द्र मल्ल र सागर पुन, ज्ञानेन्द्र मल्ल र सुनील धमला, अनिल मण्डल र ज्ञानेन्द्र मल्ल, ज्ञानेन्द्र मल्ल र नरेश बुढाऐर, अनिल मण्डल र सुवास खकुरेल तथा महेश क्षेत्री र अनिल मण्डल लगायतलाई परिक्षण गरेको थियो । तर, यि कुनै पनि जोडीले ४४ रनभन्दा माथीको साझेदारी गर्न सकेका थिएनन् ।
टियूमा सम्पन्न टी–ट्वान्टी सिरिजमा कुशल र आसिफले पहिलो खेलमा १ सय १६ रनको साझदारी गर्दा, दोस्रो खेलमा १ सय २, तेस्रो खेलमा २०, चौथो खेलमा ३३ र पाँचौ खेलमा ३० रनको साझेदारी गरेको थियो ।
कीर्तिमान नै कीर्तिमान -
त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालको उच्च प्रदर्शनसँगै धेरै कीर्तिमान बने । केही विश्व कीर्तिमान बने भने केही राष्ट्रिय कीर्तिमान बने । नेरदल्यान्ड्सविरुद्धको पहिलो खेला नेपालका ओपनरद्धय आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले ओपनिङ जोडीको रुपमा टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरे ।
दुबैले डेब्यु खेलमा नै ओपनिङ जोडीको रुपमा अर्धशतक बनाउने कीर्तिमान बनाए । कुशलले ६२ रनको अर्धशतकी इनिङ्स खेल्दा आसिफ भने ५४ रनमा अविजित रहेका थिए । ओपनिङ जोडी कुशल र आसिफले डेब्यु खेलमा नेपालको पहिलो विकेटका लागि सर्वाधिक १ सय १६ रनको साझादेरी गरेका थिए । नेपालले पहिलो विकेटका लागि गरेको यो नै सर्वाधिक उच्च स्कोर हो । यहि जोडीले मलेसियाविरुद्धको खेदमा पनि पहिलो विकेटका लागि १ सय २ रनको साझेदारी गरेको थियो ।
मलेसियाविरुद्ध दोस्रो खेलमा समेत अर्धशतक बनाएका कुशलले नेदरल्यान्ड्ससँगको तेस्रो खेलमा पनि अर्धशतक बनाउँदै विश्व कीर्तिमान बनाए । उनले टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्युसँगै लगातार तीन अर्धशतकीय बनाउने विश्वकै पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाए । उनले सिरिजमा पाँच खेलमा चार अर्धशतक जोडेका थिए ।
कुशल सिरिजमा मलेसियासँगको आफ्नो चौथो खेलमा भने १६ रनमा पेभिलियन फर्किएका थिए ।
नेपाली टोलीले टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक २ सय ३८ रनको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउँदा १ सय ४२ रनको पराजित जितेको पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान बनायो । नेपालले एक सिरिजमा सर्वाधिक छक्का समेत प्रहार गरेको छ । नेपालली त्रिकोणात्मक सिरिजमा ६१ छक्का प्रहार गरेको थियो ।
त्यस्तै सिरिजमा बलरतर्फ पनि टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियको एकै सिरिजमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत बनेको छ । टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रियमा नेपालका लागि लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले एकै सिरिजमा सर्वाधिक १३ विकेट लिएका छन् । उनले सिरिजमा पाँच खेल खेल्दा १३ विकेट लिए । उनले ८.२१ को इकोनोमीमा १९.५ ओभरमा १३ विकेट लिए ।
यसअघि यो राष्ट्रिय कीर्तिमान तीव्र गतिका बलर करण केसीको नाममा थियो । उनले ओमानमा भएको पेन्टागुलर टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय सिरिजका ४ खेलबाट ११ विकेट लिएका थिए । उनले १५.२ ओभर बलिङ गर्दै ७.६९ को इकोनोमीमा ११ विकेट लिएका थिए । एकै सिरिजमा सर्वाधिक विकेट लिनेको तेस्रो स्थानतमा पनि सन्दीप लामिछाने नै छन् । उनले पेन्टागुलर टी–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय र आईसीसी विश्वकप टी–ट्वान्टी एसिया रिजन फाइनलमा पनि सामान ७–७ विकेट लिएका थिए ।
विश्व कीर्तिमानबाट चुके करण -
यसै सिरिजमा तीव्र गतिका बलर करण केसी विश्व कीर्तिमान बनाउनबाट चुके । उनी भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले बनाएको सर्वाधिक छिटो अर्धशतकको कीर्तिमान बराबरी गर्नबाट चुकेका थिए । युवराज सिंहले १२ बलमा अर्धशतक पुरा रगेका थिए ।
टी–ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रियमा मलेसियाविरुद्ध आक्रमक ब्याटिङ प्रस्तुत गरेका करणले ११ बलमा ४४ रन जोडेका थिए । उनलाई अर्धशतक बनाउन एक छक्काको आवश्यक थियो । तर, उनी कीर्तिमान नजिक पुगरे कीर्तिमान बनाउनबाट चुके ।
१९ औं ओभरको पहिलो बल कुशलले सामना गर्दै एक रन जोडेर क्रिज करणलाई लिए । करणले दोस्रो बलमा छक्का प्रहार गर्दै ११ बलमा ४४ रन जोडे । अब उनलाई युवराज सिंहसँगको फाटेस्ट अर्धशतकको कीर्तिमानका लागि एक बलमा छ रन आवश्य थियो । उनी क्रिजमा रहेकाले उनीसँग त्यो अवसर समेत थियो । तर, उनी मुहम्मद वाफिकले गरेको १९ औं ओभरको तेस्रो बलमा एक रन लिग पुगे र कीर्तिमान बनाउनबाट चुके ।
त्यसपछि उनी २० औं ओभरमा पेभिलियन फर्किन पुगे । २० औं ओभरको पहिलो बल वाइड भएपछि साद अजिजले पुनः फालेको बलमा करण क्याच आउट हुँदै १३ बलमा ७ छक्का सहित ४५ रन जोडेर पेभिलियन फर्किए ।
न्युजिल्याण्डलाई टेस्ट सिरिज
फाप डु प्लेसिस घाइते, अस्पताल लगियो
क्यानको पारदर्शितामाथि प्रश्न